Naseho ny : 21 jolay 2020
Nikendren'ny ray aman-drenin'i Dera nisehoana teo amin'ny tanànan'izy ireo no antony nanemorana lava ny fotoana hanaovana ny batisan-dRivo, ary tena niomana fatratra tokoa izy ireo tamin'izany.
Naseho ny : 18 jolay 2020
Ny dingam-piainana nolalovan'i Rivo taorian'ny hasoavana dia ny batisa, na dia nirin'i Dera sy Vola ho notanterahana fotoana fohy taorian'ny nahaterahany aza izany. Ny antony : tian'ny ray aman-drenin'i Dera ho tany Ambatomainty no natao izany, ary dia tanteraka tokoa.
Naseho ny : 16 jolay 2020
Nataon'i Vola izay fomba rehetra tsy handratra ny ray aman-drenin'i Dera teo amin'ny fomba amam-panao tsy niraisana safidy, ny amin'ny fomba hanatanterahana ny hasoavan-jaza.
Naseho ny : 15 jolay 2020
Nampandrenesin'i Dera sy Vola ny ray aman-drenin'i Dera ny amin'ny hanatanterahana ny hasoavan'i Rivo. Avy hatrany dia nihetsika izy ireo ny amin'ny fombafomba rehetra homanina araka ny fanao, izay somary nahasadaikatra loatra an'i Vola sy tsy dia namparisika azy firy. Noraisin'i Dera sy Vola an-tànana ny raharaha : dokotera mpandidy no hanao ny didipoitra.
Pejy 6 amin'ny 66